Horudhac: Southampton vs Manchester City… (Kaddib guushii ay ka gaartay Reds, Kooxda Citizens oo caawa u safreysa Saints) – Gool FM
(Southampton) 05 Luulyo 2020. Kaddib guushii ay ka gaartay kooxda ku guuleysatay horyaalka Premier League kal ciyaareedkan ee Liverpool naadiga Manchester City ayaa doonaysa inay guulaheeda sii wadato iyadoo caawa u safreysa Southampton.
Kooxda martida loo yahay ayaa dhankeeda ku raaxaysanaysa guushoodii ay ka gaareen Watford daqiiqadidi ugu dambeysay.
Taariikhda: Axad 05 Luulyo 2020
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 9:00 Habeennimo xilliga geeska Afrika.
Kooxda Southampton ma jiro wax dhaawacyo cusub ah oo haysta, inkastoo Sofiane Boufal uu qarka u saaran yahay inuu seego kulankiisii saddexaad oo xiriir ah, maxaa yeelay dhaawac bowdada ah ayaa ku soo gaaray tababarka.
Pierre-Emile Hojbjerg ayaa dhankeeda shaki laga galinayaa kulankan isagoo sii wada ka soo kabashadiisa dhaawac canqowga ah oo ka soo gaaray kulankii ay wajaheen Arsenal.
Manchester City ayaysan u badnayn inay wax isbedel ah ku sameyn doonto shaxdii ay guusha kaga gaartay Liverpool habeenkii uu jimcaha soo galayey Riyad Mahrez iyo Bernardo Silva ayaana ku tartamaya safka hore.
Sergio Aguero ayaa ah ciyaaryahanka kaliya ee dhaawaca kaga maqan Kooxda Manchester City kulankan.
>- Kooxda Southampton ayaa markii ugu horreysay guuldarro la kulmi karta todobo kulan oo xiriir ah ee horyaalka Premier League ay wajaheen Naadiga Manchester City.
>- Man City ayaa guuleysatay 10 ka mid ah 12-keedii kulan ee la soo dhaafay oo ay wajaheen kooxda Southampton, waxaana ku jira lixdii kulan ee ugu dambeeyey, waxaana cel-celis ahaan ay iska dhaliyeen labada dhinac 17-4.
>- Kooxda Southampton ayaa loo diiwaan gelin karaa 11 guuldarro oo garoonkeeda ku soo gaarta hal xilli ciyaareed markii ugu horreysay dhammaan 92-kii xilli ciyaareed ee horyaal ay ciyaareen taariikhdooda.
>- Southampton ayaa heshay 40-dhibcood kaddib 32 kulan oo ay ciyaartay, waana wax la yaab leh marka loo eego wadar ahaan xilli ciyaareedkii 2017-18 oo ay heleen 36-dhibcood iyo kal ciyaareedkii hore ee 2018-19 oo ay uruursadeen 39-dhibcood.
>- Saints waa kooxda kaliya ee Premier League taasoo aan weli barbaro gelin hal kulan sanadkan 2020.
>- Danny Ings ayaa dhaliyey goolka furitaanka ciyaarta siddeed kulan oo uu dheelay xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League waana in ka badan ciyaaryahan kasta oo kale.
>- Manchester City ayaa 4-0 guul ka gaartay Liverpool, waxaana guushaasi ay ahayd toodii 25-aad ee Premier League ay gaaraan iyagoo dhaliyey ugu yaraan afar gool kana hoos ciyaaraya tababare Pep Guardiola.
>- Kooxda Man City ayaa lumisay 30-dhibcood xilli ciyaareedkan marka loo barbardhigo 30-dhibcood oo ay lumisay guud ahaan marka la isku daro xilli ciyaareedyadii 2017-18 iyo 2018-19.
>- Waxa ay khasaaro la kulmi karaan saddex kulan oo xiriir ah oo ay bannaanka ku soo ciyaareen horyaalka, markii ugu horreysay tan iyo bishii April sanadkii 2015-kii, markaasoo uu kooxda hoggaaminayey Tababare Manuel Pellegrini.
>- Guardiola marnaba guuldarro lama kulmin saddex kulan oo xiriir ah horyaalka isagoo kooxdiisu ku ciyaareyso meel ka baxsan garoonkeeda xirfaddiisa macallinnimo.